Izimakethe kanye neCointop: 2 i-GUI nezinhlelo zokusebenza ze-CLI zokuqapha ama-Cryptocurrencies | Kusuka kuLinux
Namuhla, sizophinde singene emkhakheni we Umhlaba weDeFi. Futhi ngenxa yalesi sizathu, sizokhuluma ngamaphrojekthi ama-2 athakazelisayo futhi awusizo kakhulu we izinhlelo zokusebenza ezivulekile futhi ezivulekile.
Izicelo ezi-2, enye ye- Ideskithophu (i-GUI) futhi eyodwa ye Isikhumulo (CLI) ukuze Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux yenzelwe labo basebenzisi abanentshisekelo ye- Umhlaba weDeFi, ikakhulukazi lezo usuku nosuku umhwebi (bayathengisa) ehlukile Criptomonedas ngebhizinisi. Futhi laba babiziwe "Izimakethe ne-Cointop".
I-Dash Core Wallet: Ukufaka nokusebenzisa i-Dash Wallet nokuningi!
Kumele uqaphele, ikakhulukazi kulabo I-Linuxeros onentshisekelo noma onothando nge Criptomonedas, okuthi uma unganakile noma ungafuni ukubuyekeza / wabelane ngezincwadi zethu zangaphambilini ezihlobene ne- Umhlaba weDeFi, sizoshiya izixhumanisi eziwusizo kubo ngezansi:
"Kulesi sithathu, futhi manje ukushicilelwa kokugcina, mayelana nama-Wallet Cryptocurrency Wallets afakwa kuma-Operating Systems amahhala navulekile asuselwa ku-GNU / Linux, sizokhuluma kakhulu nge "Dash Core Wallet" Futhi-ke, ngamanye amanye aziwa kakhulu futhi esetshenziswa ngabaningi.”I-Dash Core Wallet: Ukufaka nokusebenzisa i-Dash Wallet nokuningi!
"Ngokuyisisekelo, i- "Adamant" uhlelo lokusebenza lomyalezo osheshayo oluvulekile olususelwa kubuchwepheshe be-blockchain, nalo olusebenza njengesikhwama se-Crypto kanye ne-Cryptocurrency Exchange System (Exchange)."
"IDeFi ingumkhuba ovulekile wobuchwepheshe obenzeka ezungeze ubuchwepheshe bamuva be-blockchain emhlabeni wezezimali, futhi lokho kuyaqina nsuku zonke ngenxa yokwanda kwama-Cryptocurrensets, kanye nesidingo sezinhlelo zokukhokha ezidijithali nokuthengiselana kwezezimali okuthembekile, okusheshayo, kuvikelekile futhi kuyimfihlo."
1 Izimakethe kanye neCointop: I-Crypto evela kuDeskithophu naseTheminali
1.1 Yini amaMakethe?
1.1.2 Ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa kanye nesithombe-skrini
1.2 Kuyini iCointop?
1.2.2 Ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa kanye nesithombe-skrini
Izimakethe kanye neCointop: I-Crypto evela kuDeskithophu naseTheminali
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni wohlelo, ngu:
"Uhlelo lokusebenza olusebenza njenge-tracker yamasheya, ezezimali nama-cryptocurrensets."
Ngakho-ke, ngokuyisisekelo inezici nokusebenza okulandelayo, okungavumela noma ngubani ukuthi abuke kalula idatha edingekayo yezezimali, ukugcina azi ngemakethe futhi angalokothi aphuthelwe yithuba lokutshala imali:
Dala futhi ulandele kalula iphothifoliyo yomuntu siqu yezinto zezimali (amasheya, izimpahla kanye nama-indices), izimpahla (zezimali) nezimpahla ze-crypto (ama-cryptocurrensets) ongazibuka.
Ukusebenzisana namaLinux Smartphones (Librem5, PinePhone)
Vula noma yiluphi uphawu ku-Yahoo Finance ukuthola eminye imininingwane.
Lungisa imvamisa yokubuyekeza yezinto ezihlobene nephothifoliyo eyenziwe.
Imodi emnyama yokuvumela ukubonwa kokuqukethwe.
Ukulanda, ukufaka, ukusebenzisa kanye nesithombe-skrini
Izimakethe uhlelo lokusebenza lwephrojekthi UMBUTHANO WE-GNOMENgakho-ke, itholakala ekuqaleni nge Ifomethi ye- ".AppImage". Ngakho-ke, indlela yakhe Ukulanda nokufaka kungaba ngomyalo olandelayo:
Ngemuva kwalokho, ingenziwa kalula nge- Imenyu yezicelo futhi ulungiselele izinto ukukhombisa / ukususa, ngokusebenzisa okulula nokuqondile kwayo imenyu ephezulu.
Ngeminye imininingwane nge Izimakethe ungavakashela i- iwebhusayithi ku-GitHub.
Ngokusho kwe- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub wohlelo, ngu:
"Uhlelo lokusebenza lomsebenzisi olusheshayo nolungasindi (CLI) lokulandela umkhondo we-idijithali yemali."
Ngakho-ke, ngokuyisisekelo inezici nokusebenza okulandelayo, okwenza kube lula ukubhekwa kwemakethe ye-crypto ngokuphelele online ku-terminal:
Inikeza ukulandelela okulula nokuqapha izibalo ze-cryptocurrency ngesikhathi sangempela.
Ine-interface enobungane ephefumulelwe nge-htop kanye nezikhiye zokunqamulela eziphefumulelwe nge-vim.
Kunikezwe, "Cointop" Ngokuyisisekelo kungumbhalo, lapho ulandwa futhi ungafakwanga uziphu, udinga nje ukuwusebenzisa kusuka kufolda (indlela) lapho utholakala khona ngomyalo olandelayo:
Ngemuva kwalokho, uzobona ifayela lakho le- I-interface ye-CLI iyasebenza ngaphandle kwenkinga.
Ngeminye imininingwane nge "Cointop" ungavakashela i- Iwebhusayithi esemthethweni, ikakhulukazi eyakhe isigaba semibhalo.
Note: Esifundweni sami, njengoba my Isistimu yokusebenza esetshenzisiwe, is I-MilagrOS (Ukuphendula kususelwa ku-MX Linux) owokugcina inguqulo ezinzile 1.6.5 Akuzange kwenziwe ngenxa yezinkinga ze- Umtapo wolwazi we-GLIBC_2.32. Lapho ibulawa, iphose leli phutha elilandelayo eliboniswe ngezansi, ngenkathi its inguqulo yangaphambilini 1.5.4 igijime ngaphandle kwenkinga.
Okokugcina, kulabo abasebenzisa i- Imvelo ye-GNOME Desktop, the i-applet kubizwa Izinhlamvu zemali, kungaba enye indlela enhle kakhulu ye- qapha imakethe ye-crypto.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Markets y Cointop», 2 iyathakazelisa futhi ilusizo kakhulu Izinhlelo zokusebenza zeDeskithophu (i-GUI) neTheminali (CLI) yenzelwe labo basebenzisi abanentshisekelo ye- Umhlaba weDeFi, ikakhulukazi lezo usuku nosuku umhwebi (bayathengisa) ehlukile Criptomonedas ngebhizinisi; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Izimakethe kanye neCointop: 2 i-GUI nezinhlelo zokusebenza ze-CLI zokuqapha ama-Cryptocurrensets